+35 mafupi erudo ekutsaurira kushamisika mumwe wako | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 12/04/2021 19:42 | Mitsara
Kana iwe uri kutsvaga ipfupi rudo kutsaurirwa, saka iwe wauya kurudyi nzvimbo. Kupfupirwa kwerudo kupfupi kwakafanana nemapfumo madiki ayo panzvimbo yekukonzeresa ronda rakanangana, iwo anokonzeresa kunanga pamweya. Ndicho chikonzero ivo vakakosha kwazvo kana ivo vachiziva kuzvipira ivo pachavo zvakanaka kune iye akakosha munhu uyo ​​anoita kuti tigogomera zvakanyanya.
Kazhinji rudzi urwu rwekutsaurira runoshandiswa kune vaviri vacho kana kudanana nemumwe munhu watinoda asi uyo asati ave vaviri. Ehezve, iwo anogona zvakare kushandiswa kune mumwe munhu watino funga akakosha kunyangwe isiri iye watinofambidzana naye, cseshamwari kana shamwari yatinoda zvakanyanya uye isu tinonzwa manzwiro anoshamisa pese patinenge tiinavo.
1 Kuda nemashoko
2 Maitiro ekuzvitsaurira
3 Pfupi rudo rwekutsaurira iwe rwauchada
Rudo manzwiro anoshamisa anoita kuti tinzwe kumhanyisa kwemanzwiro kune mumwe munhu. Kana tichida kuisa mazwi pakunzwa kwerudo, saka zvatiri kuita kugadzirisa manzwiro iwayo kuti tinonzwa uye tinovapa njere.
Kune nzira dzakawanda dzekuisa mazwi kuda, sekunyora tsamba dzerudo, govana zvirevo, gadzira chinyorwa chehunyanzvi, tumira kadhi rerudo ... neweZvakare shandisa pfupi rudo kuzvitsaurira.
Nokuti Kana rudo rwakanyanya, kuzvitsaurira hakufanirwe kunge kwakareba. Dzimwe nguva, kana iwo mapfupi asi kusvika padanho, iwo anopfuura zvakakwana zvekuti mumwe munhu anonzwa zvakananga izvo zvaunovanzwira.
Iwe unogona kushandisa izvi zvakakumikidzwa kubva ikozvino zvichienda mberi, iwe unongofanira kusarudza iyo yaunoda zvakanyanya uye ugozvitsaurira kune iye munhu iye anokukurudzira iwe rudo rwakawanda. Kuishandisa zviri nyore, Iwe unongofanirwa kufunga nezvenzira yaunoda kuti mumwe munhu ashamiswe uye unakirwe aya akanaka mazwi iwe aunotsaura nerudo rwako rwese.
Unogona kuvatsaurira nekunyora katsamba kapepa uye kurisiya munzvimbo inotariswa nemumwe munhu. Imwe pfungwa ndeyekutumira kuzvitsaurira neshoko uye kubatanidza mufananidzo wekuti muri pamwechete uye munofara.
Iwe unogona zvakare kunyora whatsapp nekuzvipira kuti iwe ugone kuiverenga chero nguva. Kana kunyangwe kukanda chifananidzo nekutsaurira kuitira kuti mumwe munhu azvione uye azvide. Kunyangwe kana iwe uri mumwe wevanhu vakashinga kwazvo, unogona kusevezera kwaari kana ukamuona!
Nzira yekukumikidza iwe unofanirwa kufunga kuti ndizvo iyo inonyatsokodzera imi mose. Ziva kuti mumwe munhu achakuda uye kuti unonzwa wakasununguka kuzviita. Paunenge iwe wafunga, iwe unofanira kungozviita ... uye mashiripiti erudo achaita zororo!
Pfupi rudo rwekutsaurira iwe rwauchada
Panguva ino, zvakakosha kuti iwe utarise izvo zvaunofanira kuzvipira uye izvo zvaunoda kuratidza. Chete nenzira iyi iwe unozogona kuzadzikisa iwo chaiwo mazwi emunhu iyeye akakosha munhu.
Paunenge iwe uchinge waziva manzwiro aunoda kuratidza nenzira yekongiri, ipapo unogona kutsvaga pakati pese izvi zvipfupi rudo kuzvipira sarudzo kune iyo yaunofarira zvakanyanya (imwe kana anopfuura imwe). Nyora pasi uye uzvichengete zviri nyore kuti ukwanise kuzvitsaurira kumunhu iyeye akakosha kwauri.
Tevere, usarase zvakadzama nekuti tiri kuzokusiira kumwe kuzvitsaurira kwaungade.
Ndingatadze sei kukuda iwe kana iwe ukazadza nzvimbo mu mwoyo mangu?
Wakakosha muhupenyu hwangu; Pasina iwe hapana chingadai chakafanana
Pasina iwe, kusuruvara kwaizopinda zvachose pamoyo wangu uye kurisiya rakanyura mugungwa rekurwadziwa.
Ini ndinokuda iwe kupfuura zuro uye zvishoma pane mangwana.
Ndakayambuka makungwa enguva kukuwana.
Rudo rwakafanana newe; ipfupi asi yakasimba.
Ndiwe wangu akanaka kwazvo netsaona.
Kunyangwe zvodii zvinotora, ini ndichakumirira iwe hupenyu hwangu hwese.
Handina kumbofunga zvekudonha murudo, asi iwe wakauya uye iwe ukapenga.
Cupid akandipfura museve wakandipfuura wese.
Pane chinhu chimwe chete chisingakundike pasi pano: rudo rwangu kwauri.
Ini ndakapindwa muropa nezvinodhaka ... mushonga werudo rwako.
Ndakavimbisa kusambofa ndakadanana, kudzamara ndasangana newe.
Kufamba kuenda kuMwedzi kana kuchitoro chekona, asi newe.
Nyemwerero yako inobvisa kusuwa kwangu kwese.
Kutsvoda kwako hupfumi hwangu hukuru mushure mezuva rakaoma.
Sezvo hukama hwedu husina ramangwana, ndamisa nguva.
Izvo zvese zvakatanga ne "Mhoro," zvichiteverwa nekuchinjana kwemazwi, uye ikozvino isu takarara mumubhedha mumwe chete, tichimuka pamwe chete mangwanani ega ega.
Pane chimwe chinhu chandinoda manheru ano, uye icho chete chaunogona kundipa: chinotanga na "a" uye chinopera na "mor."
Chinhu chandinongoda chete muhupenyu huno kurarama newe.
Chandinonyanya kuda muhupenyu huno kusakara ndiri padivi pako.
Iyoyo nguva iyo iwe yaunondiudza kuti "ndinokuda" ini ndichakupa mweya wangu uri muruoko nepasi rose.
Ndinofamba padivi pako nezvakanaka nezvakaipa.
Ingadai yakave yakanaka, asi iwe wakazviita zvakakwana.
Kana ndikaziva chinonzi rudo, ndokutenda iwe.
Kuda ndiko kuwana kwako wega mufaro mune mufaro weumwe.
Panogara paine kupenga kudiki murudo, panogara paine chikonzero chidiki mukupenga.
Kupenga kuda, kunze kwekunge iwe uchizvida iwe zvakapenga.
Nyaya dzerudo dzine zvese zvakavanzika zvepasi.
Dzimwe nguva zvinoitika kuti izvo zvinotanga kupenga, zvinosvika zvazove chinhu chakanakisa muhupenyu.
Hakuna imwe nzvimbo yemashiripiti kupfuura iyo yaunorara neni.
Nekuti ndinokuda? Nekuti pasina kuda kuchinja chero chinhu mandiri, iwe wakauya kuzochinja zvese.
Ndine udyire uye handigone kuzvibatsira. Ndinokuda iwe wega, uye ndinodawo kuti ini ndiratidzike mundangariro dzako.
Chipfuva chako chakakwanira moyo wangu, mapapiro angu akakwana kusununguka kwako.
Handidi iwe kwandiri, ndinoda iwe uneni. Zvakasiyana.
Kuva kana kusava newe ndicho chiyero chenguva yangu.
Rudo harufanirwe kuve rwakakwana. Izvo zvinongoda kuve zvechokwadi.
Pano isu tiri varoti, vasina ruzivo, avo vachiri kutenda musimba remashoko.
Kuda mumwe munhu ndiko kugona kuona mashiripiti ake ese uye kumuyeuchidza nezvazvo kana achinge akanganwa.
Zvirokwazvo iwe wawana iko kwakakwana rudo kuzvitsaurira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » Pfupi rudo rwekutsaurira